Ogeysiis Fariin muhiim ah oo ku socota Somaalida ku nool Minnesota
March 2, 2012 - Written by
Fadlan kasoo qayb gal Shir lagu casumay madaxda Gobolka Minnesota iyo labada Bangi ee ugu waawayn gobolkan Wells Fargo iyo Usbank, iyo saxaafada Maxaliga ah, Culimmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waqtigu waa 6:00pm, goobta waa Abubakar As- Saddique Islamic Center.Warbixin kooban: Sida aan dhamaanteen lawada socono waxaa jirtay in Bangiyada waawayn ee Maraykanka ay diideen inay la shaqeeyaan xawaaladaha Soomaalida, waxay soo martay heerar kala duwan, ugu danbayntii bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa Franklin Community Bank oo ahaa bangi yar u sheegay in bisha December 2011 kadib uusan la shaqayn doodin xawaaladaha Soomaalida.
Bangiyadu Maxayleeyihiin:Sababta ugu wayn ee bangiyadu ku an dacoonayaan ayaa ah, waxaan ka baqaynaa in Dowladu mustaqbalka cadaadis nasaarto ama sharciyo nagu soo rogto, maadaama Somaaliya Al-shabaab joogaan. Laakiin dood aas waxaa wiiqaya, Xawaaladaha ka furan Marayka way sharciyeysan yihiin, shuruudaha dowladu karabtana way buuxiyeen, ilaa hadana ma maqal dhibaato ka jirta iyaga iyo xaga dowlada. Sikale hadii loo dhigo waa ganacsi sharciyeysan oo dowlada shati ka haysta.
Sababha ugu muhiimsan waxaa kamid ah; waa halbowlaha nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed gudaha wadanka, qaxootiyada iyo dibadaba, waa gurmadka dag daga ah oo looga jawaabo, markasta oo dhibaato rabaani ah dhacdo, sida abaaraha, daadad ka, iwm. Xawaaladaha waa kaabayaasha dhaqaalaha iyo Bangiga qura ee u shaqaynaya wadanka Soomaaliya. Warbixintaan kooban kadib, maxay tahay fariinta jawaabta la idiinka doonayo?
Hassan Jama (Hassan Dhooye) Executive Director
2824 13th Ave South Minneapolis,
MN 55407 Email:aaic@abuubakar.org